Iyo nyowani Galaxy Tarisa ... haisati ichikurudzira? | Ndinobva mac
Samsung yakaunza nyowani Samsung Galaxy Watch iyo inoratidzira hupenyu hurefu hwebhatiri, kubatika kweLTE, kugona kwehutano, uye dhizaini dhizaini. Wachi ichakwikwidza neApple newwatchwatch kutanga iyi kudonha. kana kwete?
Izvo zviri pachena ndezvekuti Samsung haina kukwanisa kuvhara izvo Apple inofunga neApple Watch uye ndezvekuti kunze kwekunge taenda kunze munzira tinowona vanhu vazhinji neApple Watch pachiuno chavo uye ndizvo el Apple Watch iApple Watch chero chavanotaura.
Mukuratidzwa kweiyo itsva Galaxy Watch ivo vakataura:
KuSamsung, isu tine nhoroondo refu yekupa vatengi sarudzo, nepo tichichengetedza hunyanzvi mukati mezvigadzirwa zvedu, uye isu tinofara kuenderera nenhaka inodada yeGPS yedu line nezvipfeko zvedu, akadaro DJ Koh, mutungamiri uye CEO weIT & Division. nhare yekutaurirana kambani, Samsung Electronics.
Iyo nyowani Galaxy Watch yakagadzirirwa nzira dzese dzehupenyu kusangana nezvinodiwa nevatengi, senge inoshanda zvakanyanya bhatiri hupenyu kuti ugare wakabatana kwenguva refu uye zvirinani kutsvagisa hutano kubatsira vashandisi kuchengetedza zvinangwa zvavo.
Zviri pachena kuti Samsung inoda kukwikwidza yakanangana neApple Watch, asi parizvino haisi kubudirira kunyangwe hazvo iyo Apple Watch ichiramba yakafanana, iine zvigadziriso zvishoma zvehurdware asi yakawanda software nyowani.
Zvimiro zveiyo nyowani yeGreen Watch ndeaya:
1 Ramba wakabatana - zvisinei kuti zuva rako rinokutora kupi
2 Rarama hupenyu hwakadzikama
3 Ratidza kugadzirwa kwakanaka uye kusingagumi
4 Dzidza zvakanakisa zveSamsung Galaxy Ecosystem
5 Mutengo uye kuwanikwa:
Ramba wakabatana - zvisinei kuti zuva rako rinokutora kupi
Iyo Galaxy Watch inovandudzwa hupenyu hwebhatiri inosvika kuma80+ maawa inobvisa kudiwa kwekuchaja zuva nezuva uye inobatsira vatengi kuramba vachiita nevhiki ravo rakabatikana. Iine hupenyu hwakareba hwebhatiri, kudimbura kubva kune yako smartphone hakuna kumbove kuri nyore nekubatana kweGreen Watch's LTE. mune vanoshanda vanopfuura makumi matatu uye nyika dzinopfuura gumi neshanu, yechiitiko chaicho-chakazvimiririra kuburikidza nekutumira mameseji, kufona, mepu, uye mimhanzi. Vashandisi vanogona zvakare kutanga nekupedzisa zuva nemangwanani nemanheru mafupi kuti vagare pamusoro pezviyeuchidzo, mamiriro ekunze, uye yavo yazvino chirongwa.
Rarama hupenyu hwakadzikama
Yakagadzirwa nehutano mupfungwa, iyo Galaxy Watch inopa yechokwadi yakazara hutano chiitiko neayo nyowani yekugadzirisa manejimendi tracker, iyo dinowanzoona kukwirira kwepfungwa uye inopa maitiro ekufema kubatsira kubatsira vashandisi kutarisana uye kutarisisa. Uyezve, imwe yepamusoro yekurara tracker inoongorora ese matanho ekurara, kusanganisira maREM macircule, kubatsira vashandisi kugadzirisa maitiro avo ekurara uye kuwana zororo ravanoda pazuva ravo.
Nekurara uye kusagadzikana kuri pasi pekutonga, iyo Galaxy Watch zvakare inobatsira vashandisi kuzadzisa zvimwe zvehutano uye zvehutano zvinangwa, kusanganisira kurovedza muviri. Iyo Galaxy Watch inowedzera 21 maekisesaizi matsva zvemukati, kuteedzera kwakazara makumi matatu neshanu Workout iyo inobvumidza vatengi kugadzirisa uye nekuchinja maitiro avo.
Ratidza kugadzirwa kwakanaka uye kusingagumi
Iyo Galaxy Watch inobata kune mamwe masayizi uye masitayera ine 46mm sirivheri vhezheni uye 42mm sarudzo mune nhema kana kumuka goridhe. Vashandisi vanogona kuenderera mberi vachiita seGlass Watch nesarudzo yemadhiri uye tambo, kusanganisira sarudzo kubva kuna Braloba, anogadzira emhando yepamusoro ekuona mabhendi. Iyo Galaxy Watch inotakura nhaka yeSamswatchwatches ine siginecha yayo inotenderera uye yakatenderera bezel, nepo Enda kudhijitari neAnogara PaRatidziro, pamwe nekuvandudza mashandisiro.
Dzidza zvakanakisa zveSamsung Galaxy Ecosystem
Iyo Galaxy Watch inopa vashandisi ese mabhenefiti eGirazi ecosystem nekugadzira isina musono ruzivo ne SmartThings, Samsung Hutano, Samsung Kuyerera, Samsung Knox, Samsung Kubhadhara, Bixby uye nemibatanidzwa yakaita seSpotify uye Under Armor. Nyore kuwana uye kudzora zvishandiso paGlass Watch ine SmartThings, zvese zvinobata pachiuno, kubva pakubatidza mwenje neTV mangwanani kusvika kugadzirisa tembiricha usati warara. Samsung inoita kuti zvive nyore kwazvo kudzora mimhanzi uye multimedia paGreen Watch neSpotify nekubvumira vashandisi kuteerera nziyo kudhara kana pasina smartphone neSpotify7 Offline modhi pamwe nekuchengetedza ruzivo rwakachengeteka neSamsung Knox uye nyore kuvhura maPC kana mapiritsi uchishandisa Samsung Kuyerera.
Mutengo uye kuwanikwa:
Iyo Galaxy Watch ichave iripo kutanga muUS muna Nyamavhuvhu 24, 2018 kunzvimbo dzakasarudzwa dzevatakuri uye zvitoro zvekutengesa, muKorea muna Nyamavhuvhu 31, 2018, uye mune mimwe misika yekusarudza munaGunyana 14, 2018. Iyo 42mm vhezheni Ichadhura $ 329.99 uye iyo 46mm vhezheni inodhura $ 349.99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo itsva Galaxy Watch… ichiri isingatenderi?
New MacBook keyboard, jailbreak watchOS, bvumidzwa patent yeMac uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac